Izikolo ezili-13 eziBalaseleyo zeZikolo ze-Ivy League zePre Med 2022
I-13 yeZikolo eziBalaseleyo ze-Ivy League zePre Med
Izikolo ze-Ivy League ziyakhuphisana kwaye ziyabiza. Jonga uluhlu lwethu lwezona zikolo zibalaseleyo ezingezizo i-Ivy League ze-pre med. Umgangatho wokufunda wezi zikolo uhambelana namaziko e-Ivy League, ayafikeleleka, kwaye anamazinga aphezulu okwamkelwa.
Amaziko e-Ivy League adume kakhulu, ukuba ayizozona zikolo zidumileyo e-United States, emva koko, iinkqubo zabo zemfundo zikumgangatho wehlabathi kwaye ziphezulu. Liphupha lomfundi ngamnye ukuya kwi-Ivy League, ke ngoko, amawakawaka abafundi afaka izicelo kuye ngamnye kubo ngonyaka kwaye bambalwa kakhulu abakhethiweyo ngenxa yenkqubo yabo yokwamkelwa engqongqo.
Ukubeka ithuba lokungena kwi-Ivy League, kufuneka ubuncinci be-GPA ye-3.7 nangaphezulu kunye nenqaku le-SAT le-1500. Nokuba baneemfuno ezinzima, abafundi abaninzi basakwazi ukudibana nokuthumela izicelo zabo. Oku kwenza ukuba la maqela e-Ivy akhuphisane kakhulu kwaye amazinga abo okwamkelwa asezantsi kakhulu, malunga ne-4% ukuya kwi-8% yenqanaba lokwamkelwa.
Yintoni iSikolo se-Ivy League?
Zenza ntoni iZikolo zePre Med?
Izikolo eziBalaseleyo ezingezizo i-Ivy League ze-Pre Med
1. IYunivesithi yaseMntla-ntshona
2. IYunivesithi yaseGeorgetown
3. IYunivesithi yaseJohn Hopkins
4. IYunivesithi yaseStanford
5. IYunivesithi yase-Emory
6. IYunivesithi yaseDuke
7. IYunivesithi Yerayisi
8. IYunivesithi yaseVanderbilt
9. IKholeji yaseAmherst
10. Imeko yeDyunivesithi yaseNtshona
11. IYunivesithi yaseTulane
12. IYunivesithi yaseWashington eSaint Louis
13. Ikholeji yaseWilliams
I-Ivy League yinkomfa yeembaleki yaseMelika ebandakanya iiyunivesithi ezisibhozo zophando zabucala. Ezi zikolo zithathwa njengezona zihloniphekileyo kwaye ziphezulu kuzo zonke iikholeji zase-US, izikolo ezisibhozo ze-Ivy League zezi:
Amanye amaziko aphezulu angengawo i-Ivy League okwangoku ahambelana nawo ngakumbi kwiinkqubo zonyango, eyona ndlela iphambili yeli nqaku. Iiyunivesithi ezinjengoJohn Hopkins, iStanford, iDuke, iNtshona-ntshona, kunye nezinye ezininzi kuxoxwa ngazo apha. Ngaphandle kweenkqubo zabo zonyango, ezinye iinkqubo zemfundo ezinikezelwa ngala maziko angengawo e-Ivy League aphezulu.
Ngoku, ukulandela inkqubo elungiselelweyo kwenye yezi dyunivesithi zingezo-ivy league akuyi kukufaka kuxinzelelo olungako njengoko i-Ivy League ibiya kwenza kwaye uyakufumana imfundo ekumgangatho wehlabathi ngokunjalo ukukulungiselela uhambo lwezonyango. Kuya kufuneka uqonde ukuba uninzi lwezona nkqubo zibalaseleyo ezilungiselelwe abo bafuna isikolo sezonyango aziphelelanga nje kwizikolo ze-Ivy League.
Iiyunivesithi zobugcisa be-Liberal zibonelela ngezona nkqubo ziphambili zelizwe. Namhlanje, siza kuthetha ngezona zikolo zibalaseleyo ezingezizo i-Ivy League ze-pre med.
Izikolo ezigqityiweyo ngamaziko emfundo aphakamileyo eUnited States abonelela ngendlela yemfundo yabafundi abasafundela isidanga abanomdla wokuba ngabafundi bezonyango. Ukufunda kwangaphambili, imisebenzi yamavolontiya, amava ezonyango, uphando, kunye nenkqubo yokwenza isicelo zonke ziyinxalenye yenkqubo yokulungiselela umfundi kwisikolo sezonyango.
Ezinye iinkqubo ze-pre-med zibhalwe "pre-professional" kuba zilungiselela abafundi iintlobo ngeentlobo zesidanga sokuqala okanye iinkqubo zesikolo abanezidanga ezifanayo (ezinje ngezonyango, zezilwanyana, okanye izikolo zekhemesti).
Pre-med ngumkhondo wekholeji owenziwe ngezifundo ezithile ovumayo ukuzithatha njengezona zinto zifuneka phambili kwisikolo sezonyango, nangona kuvakala ngathi yinto ephambili. Abafundi banokubaluleka kulo naluphi na uqeqesho abanqwenela ukulwenza, kodwa ukuze bahlale bekwi-pre-med track, kufuneka bathathe zonke izifundo zangaphambi kokudanga. Uninzi lwabafundi be-pre-med bagxile kwicandelo elixhumene namayeza, njengebhayoloji okanye ikhemistri.
Ukuba uyazi ukuba ufuna ukuba ngugqirha ngelixa usesesikolweni esiphakamileyo, khangela iiyunivesithi eziza kukulungiselela ngokufanelekileyo ubizo lwakho lwexesha elizayo. Nangona kunjalo, hlala ukhumbula ukuba amava akho e-pre-med kufuneka ekugqibeleni akulungiselele injongo ephezulu: isikolo sezonyango. Iprogram ye-pre-med kwikholeji efanelekileyo iya kuqinisekisa impumelelo kula macandelo amane abalulekileyo kwisicelo sesikolo sezonyango:
Ukuba nomndilili wenqaku elilungileyo
Ukufumana amanqaku aphezulu e-MCAT yindlela entle yokuqala ikhondo lakho lomsebenzi.
Ukuphuhlisa i-resume eqinile kunye nokufumana imisebenzi enomdla
Ukugcwalisa isicelo kubandakanya iileta zengcebiso, izincoko, kunye nodliwanondlebe, nangona kuya kufuneka uqaphele ukuba ezi zizimeleyo ikakhulu kwisikolo samabanga aphantsi osikhethileyo.
Kule posi, senze uluhlu lwezona zikolo zibalaseleyo ezingezizo i-ivy league ze-pre med. Ezi zikolo zimiselwa zizinto ezinje ngamazinga okwamkelwa, i-GPA, ukulungiswa kwe-MCAT, amava okhathalelo lwesigulana, kunye namava ophando.
Uluhlu olungezantsi, akukho mda ubekiweyo, zezona zikolo ziphambili ze-ivy zeligi ze-pre med.
IYunivesithi yaseNyakatho-ntshona ibekwe e-Evanston, eIllinois, kwaye sesinye sezona zikolo zingcono ze-ivy yeligi ye-pre med. Izinga lokwamkelwa kwezonyango apha li-11% kwaye uya kufuna amanqaku eSAT aphakathi kwe-1450 - 1540 okanye UMTHETHO wama-33 - 35 ukuze wamkelwe kwi-premed.
IYunivesithi yaseNorthwestern yeeNgcebiso ngeMpilo yeeNgcebiso ibonelela abafundi be-pre-med ngentaphane yezixhobo. Ingcebiso / uqeqesho lweMCAT, iikhalityhuleyitha zeGPA, kunye namathuba okwenziwa kwendawo zalapha zizibonelelo ezimbalwa ezikhoyo. INorthwestern iqinisekisa ukuba abafundi bayo bangaphambi kwe-med balungiselelwe kakuhle kwisikolo sezonyango.
Ifumaneka eWashington DC kwaye ibekwe kuluhlu lwethu lwezona zikolo zibalaseleyo ezingezizo i-ivy league ze-pre med, iYunivesithi yaseGeorgetown ibonelela ngemfundo esemgangathweni yabafundi ukuba bafezekise amaphupha abo kwicandelo lezonyango. Izinga lokwamkelwa apha li-17% kwaye uya kufuna amanqaku e-SAT angama-1370 ukuya kwi-1530 okanye uMthetho wama-31 ukuya kuma-34 ukuze wamkelwe kumzila wenkqubo.
Inkqubo yoPhando loPhando lweYunivesithi yaseGeorgetown (GUROP), evumela abafundi be-undergraduates ukuba benze uphando kumalungu e-faculty, inika uluhlu oluhlukeneyo lwamathuba ophando. IZiko lezoNyango leYunivesithi yaseGeorgetown nalo linamathuba amaninzi. Ukuvolontiya kwiSibhedlele seYunivesithi yaseGeorgetown, ukujoyina i-EMS yaseGeorgetown (GERMS), kunye nokusebenza kwiikliniki ezininzi zamahlakani malunga ne-DC zonke ziindlela zokuba abafundi bafumane amava onyango.
UJohns Hopkins wamkelwa kwihlabathi jikelele ngamagalelo akhe kwisayensi ngakumbi kwicandelo lezonyango. Awunakukhankanya ezona zikolo ziphakamileyo zonyango emhlabeni kwaye ushiye uJohns Hopkins kuyo. Ime eBaltimore, eMaryland, kwaye sesinye sezona zikolo zibalaseleyo ezingezizo i-ivy league ze-pre med.
Ireyithi yokwamkelwa yi-12%. Abafake izicelo badinga amanqaku e-SAT ukusuka kwi-1450 ukuya kwi-1560 okanye amanqaku e-ACT ukusuka kuma-33 ukuya kuma-35 ukuze aqwalaselwe ukuba amkelwe kwinkqubo eqalwayo. I-ofisi yonke “yangaphambili” e-Johns Hopkins izinikele ekuncedeni abafundi ukuba balandele izidanga ezinokwenzeka kwiindidi ezahlukeneyo.
Ngaphandle kweenkqubo zophando zesidanga sokuqala, uJohn Hopkins ubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zeklinikhi ngokwenza umsebenzi wokuzithandela kulo lonke iBaltimore. Isahluko se-Alpha Epsilon Delta, i-Hopkins Organisation ye-Pre-Health Education, kunye ne-Women's Pre-Health Leadership Society ziphakathi kwemibutho emininzi yabafundi ezinikele ekufundeni malunga nomsebenzi wezempilo eyunivesithi (WPHLS).
Abafundi banokunxibelelana noochwephesha kwisibhedlele iJohn Hopkins ngokusebenzisa uninzi lwale mibutho.
IStanford liziko lophando elikhokelayo kwihlabathi elinoqwalaselo lwehlabathi ngeenkqubo zalo zemfundo ezisemgangathweni kunye negalelo kwezamayeza, ubunjineli, ishishini, kunye namanye amacandelo. UStanford uvelise iinkokeli zehlabathi kwimibutho eyahlukeneyo kunye namacandelo abandakanya abongameli, abantu abadumileyo kunye noosonzululwazi abaninzi.
Ukhetho lwe-pre-med lweStanford lunzima ngenqanaba lokwamkelwa le-4.4%. Ukuze wamkelwe, kufuneka ube namanqaku eSAT phakathi kwe-1420 - 1570 okanye amanqaku eSAT phakathi kwama-32 ukuya kuma-35. Inkqubo yabo yokuntywiliselwa eStanford kuthotho lweMithi (SIMS) ivumela abafundi besibini, abancinci, kunye nabadala ukuba bajonge oogqirha kwiSibhedlele saseStanford, iSibhedlele soLawulo lwePalo Alto Veterans, kunye neSibhedlele saBantwana saseLucile Packard.
IYunivesithi yaseStanford sesinye sezona zikolo zilunge kakhulu ze-ivy ze-pre med kwaye ziya kukubonelela ngezixhobo ezifanelekileyo nezifanelekileyo zokugqwesa kunyango lwakho.
IYunivesithi yaseEmory ibekwe eAtlanta, Georgia, kwaye sesinye sezona zikolo zingcono ze-ivy zeligi ze-pre med. Inkqubo yokukhetha ayinzima kakhulu kwaye ubeka ithuba lokungeniswa kwiprogram ecwangcisiweyo ukuba unamanqaku e-SAT aqala ngo-1350 ukuya ku-1520 okanye umlinganiselo we-ACT phakathi kwama-31 ukuya kuma-34.
Ukucebisa kwangaphambili kwezempilo kaEmory kunceda abafundi balungiselele izicelo zesikolo sezonyango ngeendibano zocweyo, imisebenzi, kunye neeseshoni zamaqela amancinci.
Iyunivesithi ibonelela ngamathuba amaninzi ophando kwaye ide ivumele abafundi ukuba bafumane ikhredithi yekhosi ngemizamo yabo. Amanye amathuba ophando e-Emory afuna ukuba abafundi babhalise kwikhosi ngelixa bephanda ukubafundisa imigaqo yophando. Abafundi banokwabelana ngomsebenzi wabo noontanga kunye nabacebisi kwiisimpoziyam zophando zasekwindla nasentwasahlobo.
IYunivesithi yaseDuke liziko eliphakamileyo lokufunda elibekwe eDurham, kuMntla Carolina, kwaye kuluhlu lwethu lwezona zikolo zibalaseleyo ezingezizo i-ivy league ze-pre med. Izinga lokwamkelwa apha liqinile kwi-7.8%, ke ngoko, kufuneka ube phezulu kumdlalo wakho ukuze uqwalaselwe ukwamkelwa kwingoma eqalwayo. Ukuba unamanqaku e-SAT phakathi kwe-1500 ukuya ku-1560 okanye umlinganiselo we-ACT phakathi kwama-33 ukuya kuma-35 emva koko ubeka ithuba lokwamkelwa.
Ngaphandle kokuba nzima kakhulu ezifundweni, uDuke unezinga eliphezulu lama-85 ekhulwini lokwamkelwa kwisikolo sezonyango. ISikole sezoNyango sikaDurham kunye noDuke sibonelela ngobutyebi bezinto onokukhetha kuzo abafundi baseDuke, ukusuka kwiingcebiso zobuqu ukuya kuphando kunye namathuba okufunda.
IYunivesithi yaseRice sesinye sezona zikolo zigqwesileyo kwi-non-ivy league ye-pre med e-Houston, eTexas, kwaye yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo eTexas. Inikezela ngenkqubo yokulandelela kwangaphambili ukulungiselela ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo abafundi kwisigaba esilandelayo sohambo lwabo lonyango. Ireyithi yokwamkelwa yi-8.7% kwaye ukuba unamanqaku eSAT phakathi kwe-1470 - 1560 okanye amanqaku e-ACT phakathi kwama-33 - 35 ke unokwamkelwa kwinkqubo elungiselelwe.
I-Ofisi yeeNgcebiso kwiYunivesithi yaseRice ibonelela abafundi be-pre-med ngobutyebi bezibonelelo, kubandakanywa uvimba weenkcukacha wophando olufanelekileyo kunye namathuba oqeqesho kunye neengcebiso zangaphambili. IRice's Joint Admission Medical Programme ikwanceda abafundi baseTexas abafumana umvuzo ophantsi ukuba baye kwisikolo sezonyango. IHouston ikwalikhaya kwizibhedlele ezininzi ezibalaseleyo ezibonelela ngamathuba ophando, ukwenza ithunzi, kunye nokuvolontiya.
IYunivesithi yaseVanderbilt izinze eNashville, eTennessee, kwaye sesinye sezona zikolo zigqwesileyo ze-non-ivy league kwiinkqubo zangaphambili ezinelori yezixhobo zokunceda abafundi ukuba bangene esona sikolo sibalaseleyo sezonyango. Izinga lokwamkelwa lihle kakhulu kwi-10% kodwa ukuba unamanqaku e-SAT phakathi kwe-1450 ukuya ku-1560 okanye umlinganiselo we-ACT phakathi kwama-33 ukuya kuma-35 emva koko umela ithuba lokwamkelwa kulungiselelwe kwangaphambili.
IYunivesithi yaseVanderbilt inenkqubo eyomeleleyo yangaphambi konyango kwaye, njengeeyunivesithi ezininzi zophando, inkqubo eyomeleleyo yophando. IVanderbilt undergraduate Clinical Research Summer Internship, umzekelo, yinkqubo yohlobo oluthile evumela abagqwesileyo ukuba basebenze eVanderbilt University Medical Center ngelixa bephanda noprofesa.
Uninzi lwemibutho ye-pre-med kunye neeklabhu ezijolise kwiinkqubo ezithile ze-STEM zikwafumaneka eyunivesithi. Ngenxa yokuba iSibhedlele seKhampasi yaseVanderbilt sikufutshane kakhulu neyunivesithi, abafundi banokwakha ubudlelwane noogqirha.
Ikholeji yaseAmherst, ebekwe eAmherst, eMassachusetts, sesinye sezona zikolo zingcono ze-ivy zeligi ezilungiselelwe kwangaphambili. Isikolo sibonelela ngamathuba kunye nezixhobo zokunceda abafundi kwimisebenzi yabo yonyango. Inenqanaba lokwamkelwa kwe-11.3% kunye nenqaku le-SAT elifunekayo liphakathi kwe-1420-1530 ngelixa amanqaku e-ACT aphakathi kwe-31-34
I-Amherst ikwaqhayisa ngekharityhulamu evulekileyo, iyenza ibe lukhetho olulungileyo kubafundi be-pre-med abanqwenela ukwenza into enkulu ngaphandle kwe-STEM. Ngaphandle kwalonto, iAmherst yeyona ikholeji yobugcisa yenkululeko. Abafundi baya kuba nakho ukuqhelana nabahlohli babo ngcono ngenxa yobhaliso oluncinci kunye nogxininiso kwimfundo yamabanga aphantsi, okukhokelela kuqeqesho olunamandla kunye neeleta eziphawulekayo zezincomo. Uya kuba nokufikelela kubacebisi be-pre-med abayikhathalele ngokwenene inkqubela yakho.
IKomiti yoBuchwepheshe be-Pre-Health nayo iyasebenza kakhulu kwinkqubo yokwamkelwa kwizikolo zonyango, incedisa ngodliwano-ndlebe oluhlekisayo, inika ulwazi lwangaphakathi (imibhalo yodliwano-ndlebe, idatha yabenzi-sicelo bangaphambili, njalo njalo), kwaye ikucebisa kuyo yonke le nkqubo. Ireyithi yokwamkelwa kwisikolo sobugqirha ngama-75-80%, kodwa xa abafake izicelo bephinda bafakwa, inani linyuka laya kutsho phantse kuma-90%.
Unokufumana ithuba elingcono lokulandela inkqubo ecwangcisiweyo kwiYunivesithi yaseNtshona Koloni. Izinga lokwamkelwa kule nkqubo ngama-29% kwaye iimfuno zawo zamanqaku e-ACT / SAT azikho nzima ukuhlangabezana nazo. Ukuba unamanqaku e-SAT phakathi kwe-1370-1490 okanye amanqaku e-ACT phakathi kwe-30-34 emva koko ungangena.
I-Case Western Reserve University ngumzekelo omangalisayo wekholeji enendawo enkulu, njengoko ikufutshane neKlinikhi yaseCleveland eyaziwayo kunye namanye amaziko afana neziBhedlele zeYunivesithi kunye neLouis Stokes Cleveland VA Medical Centre.
Abafundi baya kuba nokufikelela kuluhlu olubanzi lokufunda kunye nemisebenzi yamavolontiya. Abafundi baseCWRU banokufumana amava eeklinikhi ngokuzinikela kunye neqela le-EMS kwikhampasi okanye ukunceda kumakhaya abantu abalupheleyo, kwizibhedlele okanye kumakhaya okubuyisela abaguli.
IYunivesithi yaseTulane iphambili kuphando lwezonyango lwenguqu kweli lizwe, kwaye abafundi bayakhuthazwa ukuba bathathe inxaxheba kangangoko. Kwisebe le-Biology leSeli kunye neMolekyuli, abafundi abaninzi banomdla kuphando kwaye banokufaka izicelo zoncedo lwasehlotyeni lokuqhubeka nezifundo zabo.
Kukwakho nemibutho ye-11 yangaphambi kwe-med kwiziko, ngalinye lijolise ngokukodwa, njengokwazisa ngoluphazamiseko, impilo yamazwe ngamazwe kunye nezempilo yoluntu, kunye ne-EMS eqhutywa ngabafundi kwikhampasi ebanzi.
Ixabiso lokwamkelwa li-17% kunye nenqaku le-SAT elifunekayo phakathi kwe-1350-1490 okanye i-ACT phakathi kwe-30-33. IYunivesithi yaseTulane yenye yezona zikolo zingcono ze-ivy ze-pre med kwaye ikubonelela ngezakhono zethiyori kunye nezenziwayo zokwenza nasiphi na isikolo esikwamkelayo.
Esi sesinye sezona zikolo zibalaseleyo ezingezizo i-ivy league ze-pre med kunye nelinye lawona maziko aphakamileyo okufunda eWashington. Ibekwe kwindawo ye-19 kwiiyunivesithi ezigqwesileyo kwihlabathi yi-US News & World Report. Ikwabonelela ngomkhondo obonelelwa kwangaphambili kwaye ikhuthaza abafundi ukuba bafake izicelo.
Imfuno yamanqaku e-SAT iphakathi kwe-1480-1550 kunye noMthetho uphakathi kwe-33-35. Ukwenza i-acing nokuba yenye yala manqaku kunokukufumanela ithuba kwinkqubo ecwangcisiweyo. Qaphela ukuba inqanaba lokwamkelwa li-13% kuphela ke, ukwamkelwa kukhuphiswano.
Abafundi be-WashU pre-med bafumana ukufikelela kwinkqubo yokucebisa yeminyaka emine, kunye neesemina zamalungiselelo e-MCAT, udliwano-ndlebe oluhlekisayo, iindibano zocweyo zokubhala izicelo zesikolo, kunye nezibhedlele ezibini ezikufutshane. I-WashU ibonelela rhoqo ngoncedo lwezandla, kunye nophando olufanelekileyo kunye ne-internship, ukuqinisekisa ukuba abafundi babo be-pre-med basendleleni efanelekileyo.
IKholeji yaseWilliams sesinye sezona zikolo zibalaseleyo ezingezizo i-ivy league ze-pre med ngereyithi yokumkelwa kwe-13%. Ukwamkelwa kwinkqubo kukhuphisana kakhulu kodwa ukuba unamanqaku eSAT aphakathi kwe-1410 -1550 okanye UMTHETHO ophakathi kwama-32-35 ke unethuba lokwamkelwa.
Iinkqubo ezininzi ze-pre-med kwiKholeji yaseWilliams zikhethekileyo kubafundi bakaWilliam. Umzekelo, ikholeji ibonelela ngenkqubo yokufunda exhaswa ngokupheleleyo exhaswa zii-alumni apho abafundi banokusebenza kwindawo abayithandayo. Bangaphezu kwama-200 abafundi abenza uphando lwasehlotyeni eWilliams, kwaye abafundi banokufaka izicelo zoqeqesho eWhitehead Institute, eHarvard Stem Cell Institute, nakwiMarine Biology Laboratory eyenzelwe abafundi bakaWilliams.
Oku kuzisa esiphelweni kwezona zikolo zili-13 zigqwesileyo ezingezizo i-ivy league ze-pre med. Ukuba wenza uphando lwakho okanye sele usazi izikolo zakho, uya kubona ukuba ezi dyunivesithi zikumgangatho wamaziko kwaye ziphakathi kwezona zibalaseleyo zehlabathi nokuba kukufundisa kwizifundo okanye ngemfundo yophando.
Izikolo ezili-10 zeZonyango eziBalaseleyo eFlorida ezineNtlawulo
Izikolo eziphambili ze-100 zangaphambi kokufumana imirhumo yazo yangoku
Post Previous:Iikhosi eziphezulu ezi-7 eziMfutshane eziFunwayo eMzantsi Afrika
Okulandelayo Post:Izikolo ezili-10 eziBalaseleyo zeSifo seDown eFlorida